musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Mr. Consistent". Yedu Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kieran Tierney Zvekuchecheche Nyaya- Iyo Ongororo. Kiredhiti TeamTalk uye CelticQuickNews
Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, dzidzo / basa rekuvaka, kutanga kwehupenyu hwebasa, nzira kune mukurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwepamoyo uye mararamiro nezvimwe.
Hungu, munhu wose anoziva kuti iye akanyanya kuruboshwe-kumashure iye akagadzira Arsenal uye mamwe epamusoro-soro ligi makirabhu kukumbira pamabvi avo kusaina kwake. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kieran Tierney's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Kieran Tierney akaberekwa pazuva re5th raJune 1997 kuna amai vake, Gail Tierney uye baba, Michael Tierney, muIrish Sea, chaizvo Douglas, guta guru reIsle of Man.
Kieran Tierney ane yake yemhuri mavambo nemidzi NOT kubva kuEngland, Ireland kana main Scotland, ASI kubva kuIsle of Man, chitsuwa chakabikwa nemahombekombe egungwa, dzimba dzekare dzakafananidzirwa pazasi.
Kieran Tierney- Upenyu hwepakutanga uye Mhuri Yemashure. Chikwereti kuDigimap
Zvakadaro pane yake mhuri uye nhoroondo, zvinokwanisika kuti madzitateguru a Kieran Tierney vaive pakati peavo vakatambura iri mumaoko evaViking. Idzi ndidzo dzaive Norsemen uyo kubva mukupedzisira 8th kusvika pakupera 11th mazana emakore akarwisa Britain. Waizviziva here? Kieran Tierney kumusha kwaDouglas kwakanyorwa munhoroondo senzvimbo yekutanga muGreat Britain kurwiswa Vafambi dzakanyatso kutenderedza AD 793.
Mutambi wenhabvu wechiChirungu ane midzi yemhuri yeScotland akaberekerwa semumwe wevana vaviri kuna mai vake vaaida, Gail uye baba Michael (vese vari pamufananidzo pazasi) vanoitika mune yavo ma50's panguva yekunyora.
Kieran Tierney Vabereki
Kieran akakurira pamwe nehanzvadzi yake mukuru pamwe chete nevabereki vake Muirhouse, imba yekugara inowanikwa kuchamhembe kweElinburgh, guta guru reScotland. Asides achirarama hupenyu hwakafanira achiri mukomana, Mishumo inotaura kuti semwana wekupedzisira mwana, Kieran akatanga kudhonzwa asi akazowiswa pasi nevabereki vake.
Kieran Tierney akakura achiri mukomana mukomana Celtic fan. Musoro wemhuri yake (baba vake), Michael akave nechokwadi chekuti nhengo dzese dzemhuri dzaive neCeltic mwaka matikiti akabata. Chaizvoizvo, mhuri yake yese yaifa-yakaoma maCeltic vateveri venhabvu nhabvu yavo vachimhanya nematsipa avo.
Paaive mukomana, Tierney aigara achibvunza amai vake nezvejee reCelt nguva yeKisimusi yese. Imwe yenguva isingakanganwiki mumakore ake ekutanga yaive nguva iyo Celtic yakakunda kaviri yeScotland Premier League uye mukombe weligi, rwiyo rwakasimudzira danho rake rekuve mutambi wenhabvu.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Vabereki vaKieran Tierney vakaita kuti adzidziswe pane chimwe chikoro cheMotherwell chaicho St Brendan's RC Primary. Gare gare, Tierney akatanga kuenda kuWest Lady's High School zvakare iri muMotherwell. Waizviziva here?. Ainakidzwa nemazuva ake ekudzidza achiri mudiki nekuti amai vake, Gail Tierney aive mukadzi wemanheru echikoro chake.
Iyo Chikoro Quiz iyo yakatungamira kumutyairi wake kuti ave nyanzvi:
Kupa nhoroondo yehupenyu hwake hwehudiki kuchikoro, Kieran akamboti;
“Pandaive kuchikoro, takanzi tisarudze zvidzidzo zvedu tozvinyora pasi zvataida kuzoita sebasa kana takura. Ini ndaigara ndichinhonga nhabvu asi mudzidzisi wangu akandiudza kuti handifanire kuzviita. Pane kudaro, ini ndinofanira kunyora pasi 'Joiner' kana chero chinhu chine hukama".
Kana iwe uchiverenga usingazive,Joiner"Munhu ane basa rayo kugadzira matanda emukati echivako, akadai masitepisi, masuo nemapuranga ewindo. Tierney akanyatsoramba zano remudzidzisi wake paari wekubatana. Kubva zuva iro, akapika kuratidza mudzidzisi wake zvisizvo nekutanga kutora kuomesa musoro kuchiroto chekuva mutambi wenhabvu.
Kufarira kwake kutamba nhabvu yemakwikwi echikoro kwakamuona achijoinha Chikoro cheSt Ninian High. Chikoro ichi chiri muKirkintilloch chaive nevechidiki kusimudzira nhabvu kudyidzana neCeltic nhabvu nhabvu. Kuda kwaKieran Tierney kwenhabvu kwakateverwa nekushanda nesimba pachigamba hakuna kungomuita ane pfungwa dzakasimba asi akaita kuti azivikanwe neCeltic academy iyo yakamukoka kumiedzo.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Kufarira kwaKieran Tierney pamutambo kwakamuona achipfuura nemiedzo neruvara rwakabhururuka uye achijoinha Celtic academy se 7-gore. Pakubatana, zvainakidza, asi Tierney aifanira kuzvipira kwakawanda. Pane dzimwe nguva dzaakarasikirwa nemapato ekuzvarwa kana zvinhu zvaanga achitarisira kumhuri yake kumusha. Asi parutivi rwemafirati, aive achitamba nhabvu nekuita izvo zvaaigara achifarira.
Kieran Tierney akazviona achitevera kurota kwake pajoinha Celtic. Chikwereti IG
Kupa nhoroondo yekuti vabereki vake vakamutsigira sei achiri mudiki, Kieran akambotaura nezva baba vake.
"Baba vangu vakasiya uye vakandibaira zvakanyanya. Aigara achindiperekedza kuchirongo kunyangwe musi weSvondo. Baba vangu vaive nehunyanzvi kupfuura ini uye ndakavatenda kwazvo. "
Waizviziva here? Kieran Tierney akatanga seakasiya-winger uye ASI kuseri-kumashure. Kare ikako, mudzidzisi wake weCeltic mudzidzisi Martin Miller akasimbirira kuti anogara achihwina. Kuve neiyo Celtic pfungwa yakamuona achishungurudza akawanda ekutanga achiri mukirabhu. Imwe yezvakadai inosanganisira kuve mukomana webhora.
Waizviziva here? Kieran Tierney aive mumwe wevakomana vebhora muCeltic's isingakanganwike Champions League husiku apo iyo kirabhu yakakatyamadza nyika nekurova FC Barcelona 2-1 munaNovember 2012. Pazasi pane pikicha yake anotarisa achifara kwazvo mubhora rake mukomana mabasa.
Kieran Tierney anotarisa achifara kwazvo sechidiki mukomana bhora uye academy mutambi. Chikwereti kuna IG
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Kieran zvaakaramba achikura, akazviona achigadzikana mushe muhupenyu neChikoro ichi. Iye akarwira shred yega yega yekubudirira kunyangwe pane chikamu chekuwana nyika yenyika kubatanidzwa. Nekudaro, panguva yepakati-ebasa rake, Kieran akatanga kunetsekana kwemitambo. Mumashoko ake;
“Pane imwe nguva yandakanga ndisiri kuwana mutambo. Pa14 kana 15, handina kumbobvira ndainhonga kuScotland uye ino yaive nguva yandakanga ndisiri muchikwata cheScotland, uye ndisingatambe nhabvu yenhabvu. ”
Pasina mubvunzo, nguva dzakadaro dzaive dzakanyanya kuoma paakazvinzwa nezvevamwe vaaibata navo vachiita zvirinani uye kusaina zvibvumirano zvitsva. Izvo zvakaipisisa zvakaitika zvakare panguva iyoyo. Yakanga iri nguva Kieran Tierney akavhunika gumbo paanga ari parutivi (ingangoita maawa e24) yekugadzira iyo Celtic yekutanga timu. Mumashoko ake anosuruvarisa;
"Ndakaenda kumusoro-soro kwandakamboenda kune kwakaderera zuva raitevera, asi zvakandiita mutambi ari nani uye murengi," akadaro Tierney.
Tsaona yakasarudzika yakamudzosera kumashure zvakaitika kuna December 2014. Yakava dambudziko guru kukunda mukomana wechidiki. Waizviziva here? Yaive iyo Celtic pfungwa yakamubatsira kubata nezvaaireva kuti ndiyo nguva yakaipisisa yemubatsiri webhola achityoka gumbo. “Kutyoka gumbo rangu kwaive kuongorora chaiko kwandiri. Izvo zvinogona kuitika kune chero munhu chero nguva ” Kieran akadaro.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Kunyangwe achikuvara, Kieran chivimbo chake chakakwira zvakanyanya kuva icho chakapotsa kuravira kwechikwata chechikwata chekutanga. Mushure mekubuda mukukuvara, akatanga tsika iyi yekusatora chinhu nekurebesa.
Kunyangwe nhabvu yevechidiki yanga isiri yese yekumhanyisa chikepe kwaari BUT Senior nhabvu iyo yakatanga kutenderera munaKurume 2016 yakabhadhara. Kupinda muvatambi venhabvu kwakamuita kuti ashande nesimba pane kuzviwanira kaputeni mubatsiri. Waizviziva here? Kuti abudirire kubudirira nekirabhu yake, Tierney akaenderera mberi kuhwina mikuru ina yeScotland Premier kusanganisira treble kunge 20-gore.
Kieran Tierney Celtic Mazuva Ekubwinya. Kiredhiti DailyMail uye Scotsman
Zvakare pane iyo nhanho yeEuropean, Tierney akawana zvakare yakawanda chikwereti. Chimwe chezvakadai zvakaitika panguva iye akaramba kubhabhama kutarisana nePSG's £ 160m murume Kylian Mbappe uye Bayern Munich chaicho ngano Arjen Robben uye zvinonyanya kukosha, Raheem Sterling.
Kuita zvakanaka kwazvo pamwe nekuhwina chikorobho chakakwikwidza mumutambo weChikwata cheManchester City kwakarondedzerwa seCeltic inonyanya kukwikwidza mumakwikwi e2018 / 2019 mwaka. Izvi zvakaita kuti makirabhu eve Premier League kusanganisira Man City akumbire pamabvi avo kuti asaine.
Kieran Tierney Kukwira Kumukurumbira mukurwisa Man City. Kiredhiti GlasgowLive uye DailyRecord
Sezvakango fanirwa nevakawanda kirabhu yePremier League, iyo yakazara-kumashure yakasarudza kutevera tsoka dza Virgil van Dijk uye Victor Wanyama. Akafarira mutambo wepamberi wepamberi nekubatana neArsenal muzhizha re 2019 zhizha rekufambisa nguva yekupedzisira.
Chaive chisarudzo chakaomesesa muhupenyu hwake kusiya kirabhu yaaida zvakanyanya. Pasina mubvunzo, Kieran Tierney angave kubudirira kwakanyanya muPremier League. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimukira kwake mukurumbira uye kujoina mukombe wePremier, vateveri vazhinji vangadai vakabvunza mibvunzo inopisa: "ndiani Kieran Tierney's Girlfriend?"..."Kieran Tierney akaroora here? "..." kana hongu, ndiani mukadzi waKieran Tierney "
Ndiani Kieran Tierneys Musikana
Hapana chinoramba chokwadi chekuti kutaridzika kwake kwakanaka, kunyemwerera kunetseka pamwe neyekuti akapfuma zvaisazoita kuti ave mudiwa kune vanoyemura vechikadzi. Nekudaro, kumashure kwemumiriri weSpanish akabhururuka nhabvu, kune musikana akanaka anopfeka anoenda zita rekuti Amy Hale. Amy Hale akafananidzirwa pazasi pane mutambi weIrish anotya kubva kuKirkintilloch, guta diki muScotland.
Kieran Tierney Musikana Shamwari- Amy Hale. Kiredhiti Manheru
Iyo chokwadi yekuti Kieran Tierney ane makore 22 senge panguva yekunyora zvinoreva kuti ane makore matatu mukuru pane musikana wake Amy Hale uyo ari 19.
Asides kuve WAG, Amy anonzi ari pakati pevakanyanya kutamba muIreland. Sezvino panguva yekunyora. Zuva reScotland achinge achinge aine chirevo chekuti ave anokodzera kuenda kuWorld Irish Dancing Championship akabata muDublin.
Kieran anodzvinyirira Musikana musikana Amy Hale mune yake yekutamba kupfeka. Kiredhiti Manheru
Asides kutamba, Mishumo iripo kuti Amy Hale zvakare mudzidzi kuyunivhesiti. Ari kuda kunyoresa muYunivhesiti yeStrathclyde kudzidza "Kutanga Kudzidzisa”Sepanguva yekunyorwa.
Vese mukomana nemusikana vanofarira kuzvinakidzwa munzvimbo dzakanaka-dzisingazivikanwe. Kutonga kubva kune anodikanwa kumusoro poto pazasi, zvinoita sekunge hapana anogona kumisa vaviri vacho kuti vazove mumwe wevakadzi veSpanish vebhora vanopisa.
Kieran Tierney naAmy Hale. Chikwereti kuna Scottish Zuva
The chokwadi chekuti vese vari vaviri vakadanana kwechinguva chinosiya pasina mubvunzo kuti muchato kana muchato wevaviri unogona kunge uri wedanho rinotevera.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva munhu chaiye kumashure kwezita rekuti Kieran Tierney kwaizokubatsira kuwana mufananidzo uzere iye.
Kutanga kuenda, chinhu chekutanga chero munhu chaizocherechedza nezve Kieran Tierney yake inoshamisa pasi-kune-pasi uye nepfungwa yakaoma chimiro. Kunge Ngolo Kante, ari pakati pevatsigiri venhabvu vane maitiro akanaka kwazvo uye iye anoziva mashandiro anoita nyika chairo.
Kieran mumwe munhu anotenda kuti anokwanisa kubata nemamiriro ezvinhu akasiyana aanozviwana. Chinhu chimwe chete chaanonyatsogona paari kugona kwake kubatana nevateveri vemapato ese. Muenzaniso unoonekwa pazasi.
Kieran Tierney Pasi Pasi Zvisikwa- Yakatsanangurwa. Chikwereti kuBTSport
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Nhengo dzese dzemhuri yaKieran Tierney parizvino vari kurarama zviroto zvavo. Vese amai vake, baba, vanin'ina, hanzvadzi nehama dzese varikuno vari kukohwa zvakanakira kuve nekwavo chaiko kuzviita kusvika padanho hombe reBritish nhabvu.
Kieren pachake anopararira zvakanaka kumhuri yake kunyanya mai vake nababa. Waizviziva here? Tierney paakasaina chibvumirano chake, akatenga imba muMotherwell kune vese amai vake nababa.
Kieran Tierney- Kuita kuti vabereki vake vafarire michero yevanoshanda.
Achangotama kuenda kuPremier League, Kieran kunyangwe akabhadharwa mari yakawanda achiri kunakidzwa nekugara nevabereki vake mumba maakatenga. Mumashoko ake;
“Kugara nevabereki vangu kunoita kuti ndirambe ndakavanzika mune dzimwe nzira. Mai vangu nababa vangu vachiri maneja. Ini handironge zvekuenda kunogara ndega kwemakore mashoma. ”
Imwe yemabhenefiti anofarirwa naTierney musarudzo yake yekugara nevabereki vake kuona vese mai vake nehanzvadzi yake vachimuriritira machira akasviba uye achisuka maburi ake iyo yaanofarira kusiya mukamuri yake. Zvakare mumashoko ake…
"Vabereki vangu vanondiitira zvese uye havambondinetsa. Vanoita zvese zvavanogona kuti vandibatsire paweji, uye vakaita izvi kubvira pandakanga ndiri manomwe."
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Kieran Tierney ane mambure akakosha e12,50 Mill. € sep panguva yekunyora. Izvi nekureva zvinoreva kuti iye ari miriyoni yemabhora.
Waizviziva here? Kuve nerakakosha izvi mune dzimwe nzira shandura kune hupenyu hwakanaka. Kieran Tierney ane mota inopenya KUTI hapana chiratidzo chemavara emawoko, madhaimondi uye mhete dze Stud.
Kieran Tierney LifeStyle. Kiredhiti TauraCeltic
Kieran Tierney anoshandisa mari yake pane mhuri yake uye nehama dzake dzepedyo dzaanobatsira kuchengetedza yavo yemhuri bhajeti. Kuzvipira kwake kuti ave nechokwadi chekuti vabereki vake, hama neshamwari dzepedyo zvakadzikama mune zvemari kwakafanana nekuzvipira kwake padanho.
Kieran Tierney Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kuvhuna A Record Record pamberi paMutambo wake Wokutanga:
Waizviziva here? Kieran Tierney akamborova kukwikwidza kutsva kuArsenal kunyangwe aisatongoita mutambiro wake.
Kieran Tierney- Kutyora A Record Record pamberi pemutambo wake wekutanga nekirabhu. Chikwereti kuAustraliaTV
Akashamisika mumwe wevashandi vekurapa veArsenal apo achirova Aubameyang akamira akasvetuka rekodhi kunyangwe akatakura kukuvara. Tierney akasvikira hafu yemamita pane yake yekutanga kuruka. Akazoudzwa nevashandi vekurapa veArsenal kuti vaedze zvakare, inguva iyo yaakatyora rekodhi. Waizviziva here? Tierney zvinoshamisa kusvika 55cm iyo yakamuona achirova Aubamyang's rekodhi yapfuura ne1cm.
Untold Honours: Asati auya kuPremier League, Kieran Tierney aive nehuwandu hwakasanganiswa hwe8 kirabhu uye 16 munhu anokudzwa. Tsvaga pazasi chidimbu cheuchapupu kubva kuWiki.
Kieran Tierney Chokwadi- Nhamba yake inoshamisa yeanokudzwa
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Kieran Tierney Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.